Yurub oo u kuurgalaysa dedaallada Puntland ee burcad-badeedda lagula dagaallamayo, AMISOM-na lacago kale siinaysa - Sabahionline.com
Yurub oo u kuurgalaysa dedaallada Puntland ee burcad-badeedda lagula dagaallamayo, AMISOM-na lacago kale siinaysa Maarso 08, 2012
Wefti reer Yurub ah ayaa Arbacadii (7-da March) yimid Puntland si ay u qiimeyaan xaaladaha lidka burcad-badeed ah ee gobolka ka jira, Idaacadda Shabeelle ee Soomaaliya ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Odinga oo caawimaad raadinaya si Kismaayo loo qabsado August
Saddex iyo soddon wakiil oo ka kala yimid Boqortooyada Ingiriiska, Noorway, Denmaark, iyo Holan ayaa booqday Garoowe si ay u eegaan mashruuca ay Midowga Yurub maalgelisay ee lidka burcad-badeed oo ay ku kacday malaayiinta dollar, sida uu sheegay Cabdirisaaq Maxamed Ducaysane oo ah Agaasimaha Puntland ee Ladagaallanka burcad-badeednimada. Isla mar ahaantaana, Midowga Yurub ayaa ballan-qaaday in ay kordhiyaan lacagta ay siiyaan AMISOM-ta Soomaaliya oo ay ku daraan $132 milyan, iyo weliba in ay kordhiyaan joogidda ciidamadooda jooga biyaha Geeska Afrika, Daily Nation-ta Kenya ayaa Arbacadii werisay. Ku dhawaaqiddan ayaa ka dambaysay shir ay Baraasilas ku yeesheen Raysal wasaaraha Kenya, Raila Odinga iyo Herman Van Rompuy oo ah madaxweynaha Golaha Yurub. Midowga Yurub ayaa u fidin doona hawlgalladooda dhinaca badda ee geeska Afrika ilaa 2014-ka, iyagoo gobolka u diri doona ergo rayid ah oo ku takhasustay maaraynta mashaakillada si ay u siyaadiyaan awooda dhinaca bad-maaxidda ah ee gobolka. "Waxaan rajeynayaa in markii aannu awooddeenna isu geyno aannu markaa wax ku kordhin karro amniga guud ee Soomaaliya oo aannu nabaddii iyo degganaashihii ku soo celin karro dalkan isaga ah,” ayuu yiri Van Rompuy. Waxa kale oo uu Madaxweynaha Midowga Yurub Kenya uga mahadceshay askarta ay ku soo dareen AMISOM. Odinga oo ka codsaday Yurub iyo waddamada kaleba in ay ka go’naato dejinta Soomaaliya, ayaa sheegay in “ay rajo fiican muuqanayso” marka la fiiriyo mashaakilka Soomaaliya, isagoo waddamadaa u soo jeediyey in ay maalgashadaan waqooyiga Kenya iyo Soomaaliyaba. Ma jeclaysatay maqaalkan?
Sababo la xiriir dhaqdhaqaaqyada burcad badeeda waddamada badankood waxay ka baqaan in ay ganacsi la sameeyaan waddamada marinkooda biyaha u dhow Soomaaliya. Tani waxay ka dhigan tahay in in uu jirro hoos u dhaca ku yimaada koboca dhaqaale, sababtoo ah waxaa loo isticmaalayaa lacago badan si loogu bixiyo madax-furusho ama si loogu soo kiraysto ciidamo ilaaliya badeecooyinka.
Aad iyo aad baan ugu ga xumahay lacagtaa ay reer yurub ugu deeqeen puntland iyo somaliland waxaana kutalinlahaa in aan laga qaadan sababta oo ah wxay kawataan dan gaar ah taas oo ah in ay labaxaan shidaalka laga helay somalia.